David Meunier – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Incredible Hulk (2008) IMDb 6.8 ရခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့ပြီးဆုတစ်ဆုနဲ့ စကာတင် ဆု ၈ဆုထိရရှိခဲ့ပြီးပထမကားရဲ့ အဆက် ကို ဆက်လက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကားမှာတော့ ပထမကားရဲ့ အဆက် ဘန်နာဟာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့လက်ကထွက်ပြေးလာရင်း သူ့ရဲ့ ဘဝကိုကုသနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေရင်းကုသဖို့နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ဖို့ နီးစမ်လာရာမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုသူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်လာရာမှဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့များကုသဖို့နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့သွားမလဲအမေရိကန်အစိုးရကကော ရေကုန်ရေခန်း လိုက်လံနိမ့်နှင်းတာအောင်မြင်သွားမလားဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှူရမှာပါ Credit Review
The Equalizer (2014) ဂယ်ရီ ဟာ အထပ်သားစက်ရုံတစ်ခုမှာ နေ့စားအလုပ်သမား တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ပီးးဘဝကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ဦးပါ..။နောက်ပီး သူ့ဟာ သူများအပေါ်ကူညီလိုတဲ့ စိတ်နဲ့, အမြဲတမ်း အကောင်းမြင်ပီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ လူတွေကို အားပေးတက်တဲ့ လူဖြစ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလဲ ဂယ်ရီ ကို လေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ်..။အေးဆေးနေတက်တဲ့ ဂယ်ရီတစ်ယောက်.. တစ်နေ့.!!သူထိုင်သောက်နေကျ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်သောက်နေရင်း....''အလီဇာ'' ဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမလေး နဲ့ခင်မိပါတယ်..။ ဂယ်ရီဟာ အမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေပီးစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ 'အလီဇာ''ကို အားပေးရင်းလေးလေးစားစား ဆက်ဆံရင်း ပိုရင်းနှီးမိပါတယ်..။ ဒီလိုနဲ့..!! တစ်ရက်မှာ...'' အလီဇာ'' တစ်ယောက် သေလောက်အောင် အရိုက်ခံထားရပီးး ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်လို့ သတင်းကြားတော့် ဂယ်ရီဟာဆေးရုံထိလိုက်သွားပီး 'အလီဇာ' ရဲ့ နောက်ကြောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့ အခါ...အလီဇာ ဟာ..ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ပဲလုပ်နေရပီး ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏ်းတွေ (ဖာခေါင်းဂိုဏ်း) နဲ့ ပတ်သတ်နေပါတယ်..။ ဒါကြောင့်ဂယ်ရီ ဟာ..အလီဇာ့ ကို လွတ်မြောက်ပေးဖို့,ပြည့်တန်ဆာဘဝကနေ ထွက်သွားခွင့်ပေးဖို့ အတွက်ရုရှားဂိုဏ်းခေါင်ဆောင်ကို ငွေပေးပီး သွားရောက်ငြိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်က ...
IMDB: 7.2/10 295,518 votes